Nepali Rashifal 2079, राशिफल, Nepali Rashifal, Dainik Rashifal, Aajako rashifal, Masik Rasifal, Barshik Rashifal, Yearly Rashifal
२०७९ सालको बार्षिक राशिफल
मेष राशि हुनेहरुको लागि २०७९ साल सामान्य समय रहने छ । आर्थिक दृष्टिकोणले यो वर्ष राम्रो देखिन्छ । शनि, बृहस्पति, राहु र केतु ग्रहको प्रतिकूलतले भने हानी, दुःखकष्ट बढ्ने, शत्रुहरू बढ्ने, अनावश्यक झमेलामा फस्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले उक्त ग्रहहरूको जप र पाठ गर्नाले लाभ हुने छ । माघ महिना पछि समस्याहरु हल हुने, आकस्मिक लाभ, अधुरा रहेका काम पूरा हुने देखिन्छ । शैक्षिक क्षेत्र कमजोर रहला । नोकरी क्षेत्रमा सफलता मिल्ने छ । पारिवरिक क्षेत्रमा सुख शान्ति मिल्ने छ । पशुपालन बाट फाइदा हुने देखिन्छ । बैदेशिक क्षेत्र बाट पनि सफलता मिल्ने छ । माङलिक कार्यमा सहभागी भैइएला । नयाँ ब्यवसाय को सुरुवात गरिनेछ । आर्थिक दृष्टिकोणले असार, असोज, माघ र फागुन महिना लाभदायक रहेका छन् । रातो रंग को प्रयोग अनि हनुमान र गणेश को पुजा गर्नाले बिशेष लाभ हुने छ ।
वृष राशि हुनेहरुको लागि २०७९ साल मध्यम समय रहने छ । वृहस्पति को प्रभाबले सुख शान्ति मा बृद्दी हुनेछ । आर्थिक तथा ब्यापारिक क्षेत्र बाट राम्रो लाभ मिल्ने छ । शत्रुहरू परास्त हुनेछन । पशु पालन बाट राम्रो लाभ लिनु हुने छ । चौतर्फी प्रगती हुनेछ । मानसम्मान बढ्ने देखिन्छ । पीडा र हानी नोक्सानी हुनसक्ने छ्; अत राहु र शनिदेव लाई शान्ति पर्ने कर्म हरु गर्नु पर्ने देखिन्छ । शैशिक क्षेत्र सफल रहनेछ । परिवरिक माङ्गलिक कार्य सम्पादन हुनेछ अनि सन्तान सुख पनि मिल्नेछ । पारिवरिक स्वास्थ्य बिगृनाले खर्च बढ्नेछ । वैदेशिक क्षेत्र उत्तरार्द्धमा सफल हुनेछन । श्रावण, कार्तिक, फागुन र चैत महिना शुभ रहेका छन् । सेतो रंग को प्रयोग गरि शुक्रदेव, माता लक्ष्मी को पुजा गर्नाले बिशेष लाभ हुने छ ।
मिथुन राशि हुने हरु को लागि २०७९ साल सामान्य रहने छ । आर्थिक तथा ब्यापारिक क्षेत्र मा राम्रो प्रतिफल मिल्ने छ । सुख शान्ति बढ्नेछ । नविन कार्य को थालनी हुनेछ । नोकरीका साथै नयाँ व्यवसायका अवसरहरू मिल्नेछन् । स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले सताए पनि कालान्तरमा सुधार आउने छ । पारिवरिक क्षेत्र मा राम्रो रहला । पशु व्यवसाय र व्यापारबाट राम्रो लाभ हुनेछ । वैदेशिक क्षेत्रका काम अधुरा रहलान । अध्ययन तथा अध्यापन क्षेत्रमा रुची घट्नेछ । मान सम्मान मिल्नेछ । वैशाख, भदौ, मङ्सिर र चैत महिना आर्थिक दृष्टिले शुभ रहेका छन् । वृहस्पति, शनि र केतुको शान्ति गर्नाले अशुभ फल बाट बचिनेछ । हरियो रंग अनि बिष्णु भगवान, माता दुर्गा को पुजा गर्नाले बिशेष लाभ हुने छ ।
कर्कट राशि हुने हरु को लागि २०७९ साल राम्रो रहने छ । आर्थिक अवस्था मध्यम रहने छ । नोकरी क्षेत्र बाट सफलता मिल्ने छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले सताए पनि कालान्तरमा स्वास्थ्यमा सुधार आउने छ । पारिवरिक सुख मिल्ने छ । पशुपालन बाट मध्यम प्रगती होला । मान सम्मान बढ्नेछ । वैदेशिक क्षेत्रमा सफलता मिल्ने छ । अध्ययन तथा अध्यापन क्षेत्र राम्रो रहला । धार्मिक कार्य सम्पादन हुनेछ । धार्मिक यात्रा हुनेछ । बैशाख, जेठ्, असोज र पुष महिना आर्थिक दृष्टिले शुभ रहेका छन् । सेतो रंग को प्रयोग अनि चन्द्र देव, शिव देव को पुजा गर्नाले बिशेष फाइदा मिल्ने छ ।
सिंह राशि हुनेहरु को लागि २०७९ साल राम्रो रहेको छ । नविन कार्य को थालनी हुनेछ । आर्थिक अवस्था राम्रो रहने छ । पारिवरिक क्षेत्र मा राम्रो रहला । राहु र बृहस्पती को शान्ति गर्नाले असुभ सन्कट बाट मुक्ती पाइनेछ । अध्ययन क्षेत्रमा राम्रो प्रगती हुनेछ । मान सम्मान बढ्नेछ । वैदेशिक क्षेत्रका काम अधुरा रहलान । ब्यापार तथा पशुपालन बाट लाभ लिन सकिनेछ । शत्रु परास्त हुनेछन । जेठ, असार, असोज र पौष महिना आर्थिक दृष्टिले शुभ रहेका छन् । सुन्तला रंग को प्रयोग अनि सुर्य, बिष्णु, राम भगवान को पुजा गर्नाले बिशेष लाभ मिल्ने छ ।
कन्या राशि हुने हरु को लागि २०७९ साल मध्यम रहने छ । आर्थिक अवस्था राम्रो रहने छ । नोकरी क्षेत्र मा किचलो आइलाग्न सक्छ । स्वास्थ्य समस्या आउन सक्छ । शत्रु सकृय हुनेछन । राहु र केतु को शान्ति कर्म गर्नाले असुभ फल न्यूनिकरण हुनेछ । पारिवरिक सुख मिल्ने छ । पशु व्यवसाय र व्यापारबाट राम्रो लाभ हुनेछ । वैदेशिक क्षेत्रमा सफलता मिल्ने छ । अध्ययन तथा अध्यापन क्षेत्रमा रुची घट्नेछ । दाम्पत्य जिवन शुखमय हुनेछ । असार, साउन, मंसिर र फाल्गुन महिना आर्थिक दृष्टिले शुभ रहेका छन् । हरियो रंग अनि बिष्णु, दुर्गा भगवान, बुध देव को पुजा गर्नाले राम्रो हुने छ ।
तुला राशि हुने हरु को लागि बर्ष २०७९ मध्यम रहने छ । गुरु, शनी राहु र केतु को शान्ति कर्म गर्नाले असुभ फल न्यूनिकरण हुनेछ । आर्थिक अवस्था राम्रो रहने छ । नोकरी क्षेत्र मा किचलो आउन सक्छ । मान सम्मान बढ्नेछ । पारिवरिक सुख मिल्ने छ । स्वास्थ्य बिगृन सक्छ । पशु व्यवसाय र व्यापारबाट राम्रो लाभ हुनेछ । वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ होला । वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ होला । श्रावण, भाद्र, पौष र चैत्र महिना आर्थिक दृष्टिले शुभ रहेका छन् । सेतो रंग को प्रयोग शुक्र देव अनि लक्ष्मी माता को पुजा गर्नाले राम्रो हुने छ ।
वृश्चिक राशि हुने हरु को लागि २०७९ साल राम्रो रहने छ । आर्थिक अवस्था राम्रो रहने छ । नोकरी क्षेत्र बाट सफलता मिल्ने छ । पशुपालन बाट नोक्सानी होला । पारिवरिक सुख मिल्ने छ । धार्मिक कार्य सम्पादन हुने छ । शत्रु परास्त हुनेछन । केतु को शान्ति गर्नाले असुभ फल न्यूनिकरण हुनेछ । वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ होला । अध्ययन क्षेत्रमा राम्रो प्रगती हुनेछ । बैशाख, भाद्र, आश्विन र माघ महिना आर्थिक दृष्टिले शुभ रहेका छन् । रातो रंग र गणेश, हनुमान को पुजा गर्नाले झन् राम्रो हुने देखिन्छ ।
धनु राशि हुने हरु को लागि २०७९ साल मध्यम फलदायी रहला । मान सम्मान बढ्नेछ । आर्थिक तथा ब्यापारिक क्षेत्र मा राम्रो प्रतिफल मिल्ने छ । नोकरी क्षेत्रमा मान सम्मान बढने छ । राहु, शनी र बृहस्पती को शान्ति गर्नाले असुभ फल न्यूनिकरण हुनेछ । वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ होला । अध्ययन क्षेत्रमा मध्यम प्रगती हुनेछ । पारिवरिक समस्या आउन सक्छ । जेठ, असोज, कार्तिक र फागुन महिना शुभ रहनेछन । पहेंलो रंग र बंगलामुखी को पुजा गर्नाले झन् राम्रो हुने देखिन्छ ।
मकर राशि हुने हरु को लागि यो २०७९ बर्ष सामान्य रहने छ । बृहस्पती, शनी, राहु र केतु को शान्ति कर्म गर्नाले असुभ फल न्यूनिकरण हुनेछ । नविन कार्य को थालनी हुनेछ । आर्थिक अवस्था राम्रो रहने छ । नोकरी क्षेत्र मा किचलो आउन सक्छ तर मान सम्मान भने मिल्ने छ । पारिवरिक सुख मिल्ने छ । स्वास्थ्य सुधार हुने छ । पशु व्यवसाय र व्यापारबाट राम्रो लाभ हुनेछ । वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ होला । अध्ययन तथा अध्यापन क्षेत्र राम्रो रहला । असार, कार्तिक, मंसिर र चैत महिना राम्रो रहने छन । कालो रंग र शनिदेव को पुजा गर्नाले झन् राम्रो हुने देखिन्छ ।
कुम्भ राशि हुने हरु को लागि २०७९ साल राम्रो रहला । आर्थिक अवस्था राम्रो रहने छ । स्वास्थ्य सुधार हुने छ । नविन कार्य को थालनी हुनेछ । शनी र केतु को शान्ति कर्म गर्नाले असुभ फल न्यूनिकरण हुनेछ । पशु व्यवसाय र व्यापारबाट राम्रो लाभ हुनेछ । वैदेशिक क्षेत्रका काम अधुरा रहनेछन् । अध्ययन तथा अध्यापन क्षेत्र राम्रो रहला । नोकरी क्षेत्र सामान्य रहला । झुटा अरोप लाग्न सक्छ । वैशाख, श्रावण, मंसिर र पुस महिना शुभ रहला । कालो रंग र शनिदेव को पुजा गर्नाले झन् राम्रो हुने देखिन्छ ।
मीन राशि हुने हरु को लागि २०७९ साल मध्यम रहला । आर्थिक तथा ब्यापारिक क्षेत्र मा राम्रो प्रतिफल मिल्ने छ । नोकरी क्षेत्र सामान्य रहला । धार्मिक कार्य सम्पादन हुने छ । पारिवरिक सुख मिल्ने छ । पशुपालन बाट नोक्सानी होला । राहु, शनी, बृहस्पती र केतु को शान्ति कर्म गर्नाले असुभ फल न्यूनिकरण हुनेछ । वैदेशिक क्षेत्रका काम अधुरा रहलान । अध्ययन तथा अध्यापन क्षेत्र राम्रो रहला । जेठ, भदौ, पुस र माघ महिना राम्रो रहने छन । पहेंलो रंग र बंगलामुखी माता को पुजा गर्नाले झन् राम्रो हुने देखिन्छ ।
Nepali Rashifal Widget
Embed Nepali Rashifal on your website. Copy and Paste following code into your website:
Happy New Year 2079 cards Download Nepali Calendar 2079 Nepali Calendar 2079 Dashain Tihar 2022 dates Add Nepali Patro to your website
Nepali Calendar is also known the Bikram Sambat Nepali calendar. The current Nepali Year in Nepali is Nepali calendar 2079 Bikram Sambat. Nepali Calendar is approximately 56 years and 8 and months ahead of the English Calendar known as Gregorian Calendar or AD. Nepali Calendar in Nepal is called as nepali Patro. In Nepal the new year starts from the middle of april (approximately 17th of the april). In Gregorian Calendar the days of the months are known but in nepali calendar its not the case i.e. they change yearly.
Download Ramro Patro + Get Nepali Calendar Widgets Gold, Silver Rates Vegetable Rates Dashain Tihar 2079 dates Type in Nepali